Karaté – Arbitre zonal : mety hatao eto Dago ny fampiofanana | NewsMada
Karaté – Arbitre zonal : mety hatao eto Dago ny fampiofanana
Handray hetsika iraisam-pirenena isika eo amin’ny taranja karate. Araka ny vaovao teny anivon’ny federasion’ny karate eto Madagasikara (FKM), mety hampiantranoan’i Madagasikara ny fiofanana eo amin’ny “arbitre zonal” amin’ity taom-pilalaovana ity.
Raha ny nambaran’ny filohan’ny federasiona sady filohan’ny Zone 7, Andrianavomanana Solofo Barijaona, fa ilain’ireo mpitsara aty amin’ny Zone 7 misy an’i Madagasikara sy ireo Nosy manodidina, toa an’i Seychelles, ny fiofanana mpitsara. Voalaza hatrany fa miankina indrindra amin’ny lafiny fitsarana ihany koa mantsy no mampandroso ny taranja eny anivon’ireo firenena tsirairay avy.
Ankoatra izay, tsy mbola fantatra mazava kosa aloha, hatreto, ny daty sy ny toerana hanatanterahana ity fiofanana mpitsara ity. Marihina mantsy fa samy miady ny hampiantrano izany i Madagasikara sy Seychelles.
Etsy andaniny, efa manana mpitsara iraisam-pirenena amin’ny World karate federation (WKF) isika amin’ny alalan-dRazafindrakoto Miora, hany Malagasy mpitsara iraisam-pirenena.
Eo amin’ny fifaninanana indray, tsy afa-mandray anjara amin’ny “Open de Paris” isika amin’ity indray mitoraka ity noho ny tsy fahampian’ny hoenti-manan’ny FKM.